Egg Master အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
၅။ ဆွဲထုတ်၍ စားနိုင်ပါပြီ။
✔ Egg Master ဆိုတာကတော့ ကြက်ဥလိပ်ကြော်တဲ့စက်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဥထဲကို ကြက်အူချောင်း အသီးအနှံများကိုလဲ ထည့်ပြီးကြော်လို.ရတဲ့ မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ကြက်ဥကြော်လေးရဲ. မွှေးပျံ.တဲ့ရနံ့နဲ.အတူ အလိပ်လိုက်လေး အတိုင်းတိုးထွက်လာပြီး စားချင်စရာစဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံလေးဖြစ်လို. အချိန်ကုန်သက်သာပြီးလုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။
✔ မိသားစုအတွက် မနက်စာအလွယ်တကူ လုပ်ပေးလို.ရသလို Snack အနေနဲ.စားချင်ရင်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ လုပ်ရတာ လွယ်ကူပြီး အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ဆီနည်းနည်းပဲ လိုတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ.လည်း ညီညွတ်ပါတယ်။
✔ အိမ်ရှင်မများ ၊ စားဖိုမှူးများနှင့် စားသောက်ဆိုင်များအတွက် အထူးသင့်လျှော်ပြီးအသုံးဝင်စေသည့် ၎င်းစက်လေးသည် သယ်ယူရလည်းလွယ်ကူစေပြီး ဝန်ပေါ့၍ ချစ်စရာကောင်းသောြ
*** အသုံးပြု နည်း ***
စက်လေးကို အရင်ဆုံး စစချင်း အသုံးပြု မည် ဆိုပါက –
မီးပလပ်တပ် ပါ။ မီးအနီလေးလင်း လာပါမည်။ ထို့နောက် စက်ထဲသို့ဆီ အပြည့် ဖြည့်ပါ လျှံမကျ စေရန် ဂရုစိုက်ပေးပါ။
ဆီပူ အငွေ့ များ ထွက် လာပါက မီး ပလပ်ပြန် ပိတ် ပါ။ ဆီ များအား ပုလင်းထဲ သို့ ခွက်တခု ထဲ သိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
( ပထမကြိမ် စက်ကို ဆီ ဝအောင် လုပ် ပေး ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
နောင် လုပ်စားသော အခါ များတွင် ထို့သို့လုပ်ရန် မလို အပ်ပါ။
(စတင်သုံးလျှင်သာ စက်အတွင်းပိုင်းနှံ့အောင် ဆီဆွတ်ပေးဖို့
လိုအပ်ပြီး နောင်တွင် ဆီသုံးစက်မျှသာ ထည့်ပေးပါ။ )
ဆီ နှစ်စက် သုံးစက် ခန့် အိုး ထဲ ထည့်ပါ။ ဆီ ငွေ့ပြန် လာလျှင်
ကြက်ဥလိပ်စက် ထဲသို့ ကြက်ဥ ၂ လုံး (တခါထည့် ) ထည့် နိုင်ပါသည်။မိမိနှစ်သက်ရာ အသား အသီးအရွက် ထမင်းစသည် တို့လည်း ထည့်နိုင်ပါတယ်။
အချိန်5မိနစ် ကြာ ပါက မီးလေးစိမ်း သွားပါက ကြက်ဥ လိပ်လေး အပေါ် သို့တက်လာပါလိမ့် မည်။ ဆွဲထုတ် ရလွယ် ကူစေရ
န် သစ်သားချောင်း သို့တူ လေး ကြက်ဥလိပ်အတွင်း သို့ထည့် ပါ။
၂ မိနစ် ခန့်အမြိနစ်မကြာမီပင် မွှေးပျံ့သောရနံ့နှင့်အတူ စားချင်စဖွယ်
မည်။ဘူးထဲ တွင်ပါသော ဖော့ တံအချောင်းလေးနှင့် ဆေးကြော ရလွယ်ကူပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – ၁၇၀၀၀
Delivery free for Mandalay / Yangon / Myeik
Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) / Dingtone / Skype
အမည်: Egg Master